Nhau dzeEurope • The European Times News
Mauya! Nyoresa account
Chishanu, May 27, 2022
Antarctic Orca Submarine Volcano Yakaputika neSwarm ye85,000 Earthquakes
GFZ GeoForschungsZentrum Potsdam, Helmholtz Center - 27 May 2022
Kunyangwe kubva kumhenderekedzo yeAntarctica, makomo anoputika anogona kuwanikwa. Kudengenyeka kweanopfuura zviuru makumi masere neshanu kwekudengenyeka kwakanyorwa muna 85,000 paOrca submarine volcano, iyo yanga isingashande kwenguva yakareba.
Neonatal abstinence syndrome: UNODC kurukura nezverutsigiro rwevanaamai nevacheche
Newsdesk - 27 May 2022
Denmark: kufarira muScientology kunowedzera pa 54th anniversary
Dare reVatungamiriri vezvitendero muIsrael: "Tese tiri mhuri imwe"
EuropeanTimes - 27 May 2022
Abu Dhabi International Book Fair inobata vatungamiri vemabhuku kubva kumativi ose...
Nhau desk - 26 May 2022 0
… vatungamiri nevakuru kubva bhuku fairs. Vakapinda vakakurukura ... indasitiri nematambudziko vaparidzi face. Dzimwe nyaya dzakati wandei… varongi veArab mabhuku mitambo, tine…kukurukura zvine mutsindo nyaya dzinotsigira bhuku fairs; uye simudza mazano ...
Hondo muUkraine: Mitemo mitsva inobvumira kuchengetedza humbowo hwehondo ...
Council yeEU uye European Council - 26 May 2022 0
Kubatsira kuve nechokwadi chekuzvidavirira kwemhosva dzakaparwa muUkraine, Kanzuru nhasi yatora mitemo mitsva inobvumira Eurojust kuchengetedza, kuongorora uye kuchengetedza humbowo hune chekuita nemhosva dzepasi rose.
Nyika dzemu Africa dziri kutungamira nzira pa 'chikafu masisitimu shanduko': Guterres
China: Zvakazarurwa zvitsva pamusoro pekudzvinyirirwa kweUyghurs panguva yeUN ...
Vanosvika hafu yeruzhinji rweIrish havavimbe neHurumende kuti ...
Papa Francis vanonamatira vanhu vakapfurwa muTexas
Kuparadzwa kwetsika muUkraine nemauto eRussia kuchadzoka kwemakore
Council of Europe inopedzisa kumira pamusoro pekubvisa vanhu vane hurema
UNODC neSouthern Africa vanobatana kurwisa hugandanga uye mhirizhonga ine mhirizhonga
Musangano wekusimudzira kusiyana uye kubatanidzwa muindasitiri yemafirimu...
Tedros akasarudzwa zvakare kutungamira World Health Organisation
'Musashandire vanoparadza mamiriro ekunze' mukuru weUN anoudza vakapedza kudzidza, mukusundidzira ...
Munamato werunyararo waPapa Francis kuUkraine unorangarira chiporofita makore 105 apfuura pamusoro peRussia
Tora MAY yakakosha edition!
Saina kuti uwane nhau uye kuti uwane yedu yakakosha editions ePDF!
Unogona kuzvibvisa chero nguva. Kuti uwane rumwe ruzivo, ongorora yedu Yakavanzika Policy.
Iwe wakabudirira kujoinha kunyoresa runyorwa rwedu. Iye zvino iwe unongoda kutarisa tsamba yako (hongu, zvakare spam semarobhoti dzimwe nguva anoita zvikanganiso futi) uye simbisa.
Russia: Mumwe weZvapupu zvaJehovha wokuDenmark asunungurwa pashure pemakore mashanu ari mujeri
MaMP nevatungamiriri vezvitendero vanokurukura paParamende yeUK basa uye kukosha kwekudyidzana
- Exclusive chikamu -
Govera The European Times
'Musashandire vanoparadza mamiriro ekunze' mukuru weUN anoudza vakapedza kudzidza, mukusundira kune remangwana resimba rinodzokororwa
Middle East neNorth Africa: huwandu hwepamusoro hurovha hwevechidiki munyika
Simba reruzivo mukudzivirira nekudzivirira kubva kuhutsotsi panguva yeHusiku Hurefu hwekutsvagisa
Hondo muUkraine: Mitemo mitsva inobvumira kuchengetedza humbowo hwemhosva dzehondo
Council yeEU uye European Council - 26 May 2022
Newsroom - 26 May 2022
Kuedza kuparadzwa kwetsika yeUkraine nekupinda nechisimba mauto eRussia, kuchakanganisa kukurumidza kwekupora munguva yepashure pehondo, nyanzvi yakazvimirira yeUN yekodzero dzevanhu yakayambira neChitatu.
Social Climate Fund: Mazano eParamende ekuchinja kwesimba kwakaringana
Paramende yeEurope - 24 May 2022
EU inoda shanduko yesimba yakarurama. Tsvaga kuti Social Climate Fund ine chinangwa chekubatsira sei avo vanonyanya kutarisana nehurombo hwesimba.
Mushure memakore mashanu ari mutirongo, Dennis Christensen akaburitswa Chipiri ichi 24 Chivabvu. Ari kutarisirwa kudzoserwa kuDenmark neChitatu...
Donohoe paUkraine: Isu tinoziva zvakanyanya nezvekutambura kwavo kwevanhu panguva ino yakaipa
Zvakataurwa naPaschal Donohoe zvichitevera musangano weEurogroup wa23 Chivabvu 2022 Rega nditange uyu musangano wevatori venhau nepfungwa yevanhu ve...
Musangano wekusimudzira kusiyana uye kubatanidzwa muindasitiri yemafirimu uye nekumwe
Mutambo uye kunyanyisa
Brian Evans kuburitsa "Ini Ndiri Mufambi," Kubvumbi 20 pa iTunes yakagadzirwa naNarada Michael Walden.
Zvimwe kubva kuSports
Nei Chechi ichipikisana nemashiripiti (1)
Vangani vanhu vakasiya Russia nekuda kwehondo?
Zvimwe kubva Kubvunzurudza
Heino sarudzo yezvinyorwa izvo cna zvinobatsira pakuziva kwepamusoro munharaunda
Torsten Hjelmar - 25 May 2022
Papa Francis vanorumbidza mukuru weRussia weVatendi vekare ne "maitiro erunyararo"
Jan Leonid Bornstein - 19 May 2022
Kushevedzera Kukurumidzira kuUN High Commissioner weHuman Rights
Nhau desk - 7 May 2022
Biodiversity Day: Mukuru weUN anodaidzira kuti 'vake ramangwana rakagovaniswa rehupenyu hwese'
Kutenda-kwakavakirwa Engagement kuStockholm+50
Simba guru raGodwits
Kuchinja kwemamiriro ekunze kuri kukanganisa kuwaniswa kwemvura nehutsanana
Maodzanyemba Mwenje anogona kunzwika kunyangwe asiri kuoneka
Sei Pacific iri Pacific Ocean?
COPENHAGEN, DENMARK, Chivabvu 26, 2022 /EINPresswire.com/ -- Kufarira muScientology kunowedzera pa54th anniversary. Nepo Scientologists varipo muDenmark kubvira angangoita June 5th 1968, kubvira iyo huru ...
Vatungamiriri vezvitendero nevakuru vakuru vehurumende vanoungana kuti vakurukure zviri kuitwa pamwe chete mukusimudzira runyararo, kushamwaridzana, uye kuwirirana.
Zvinokosha zveOrthodox anthropology
Munyori: Fr. Vasily Zenkovsky Semuenzaniso wekuti Orthodox anthropology inosiyana sei neiyo yemasangano ekuMadokero, maitiro akasiyana kune mutauro wekuzvarwa mu...
Proven: Vakadzi vanoda kumbundirwa muviri
Iyo yakanakisa michero yejusi yekuonda
Zvimwe kubva Kufamba
Abu Dhabi International Book Fair inobata vatungamiri vemabhuku kubva kumativi ose enyika dzeArabhu
Mutambi ane mukurumbira webhuku remakomiki paDC neMarvel Comics, Comic Book Artist, afa
Andrea Canepari anopa chinyorwa chake 'The Italian Legacy in Philadelphia' muRoma
Nhau dzeEurope, nhau Europe, paramende yeEurope, kodzero dzevanhu, mitambo, zvematongerwo enyika, nhau dziri kubuda, European Union, hutano uye rusununguko rwechitendero.
© FRVS+MPCP 2022. European Times® Nhau yakanyoreswa sechiratidzo cheEU. Kodzero dzese dzakachengetwa. The European Times® nelogo yeThe European Times® zviratidzo zveEU zvakanyoreswa neFRVS+MPCP.
ZVINHU ZVAKATAURWA: Mafungiro evanyori kana kuburitswa muzvinyorwa ndeaya evanoataura uye ibasa ravo. Kana iwe ukawana chero zvisizvo iwe unogona kugara uchibata kune newsdesk kutsvaga kugadzirisa kana kodzero yekudzokorora.
DISCLAIMER TRANSLATIONS: Zvese zvinyorwa zviri pasaiti ino zvakaburitswa muChirungu. Shanduro dzakaturikirwa dzinoitwa kuburikidza nemaitiro ega ega anonzi neuronal dudziro. Kana usina chokwadi, gara uchitarisa kuchinyorwa chekutanga. Ndinotenda nekunzwisisa kwako.